तपाइँको पैतलामा यस्तो चिह्न त छैन ? यसो भन्छ ज्योतिष शास्त्र – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/तपाइँको पैतलामा यस्तो चिह्न त छैन ? यसो भन्छ ज्योतिष शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र अनुसार हात हेरेर भविष्य बताउने विषय त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर समुन्द्र शास्त्रले शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यहाँ रहेका रेखाका आधारमा मानिसको भाग्य र स्वभाव बताउन सकिने बताउँछ ।
हातका मात्र होइन खुट्टाका रेखा पनि मानिसको स्वभाव र भाग्य विश्लेषणका लागि महत्वपूर्ण हुने यो शास्त्रमा उल्लेख छ ।यहाँ समुन्द्र शास्त्र अनुसार खुट्टाका पैतलामा हुने चिन्हको अर्थबारे चर्चा गरिएको छ ।
खानेकुरा फाल्ने गर्नुभएको छ ? नगर्नुस् त्यस्तो गल्ती
आज सुर्यग्रहण, आज १० बजेबाट नखानुहोस यी खानेकुरा
काभ्रेमा भेटिए एउटै आमाका ३ दाजुभाई ,सबैलाई चकित पार्ने जादुमय स्वर~अब भाइरल हुने पालो(भिडियो)